Google haigadzirise maapplication eIOS kuitira kuti isazivise nezve izvo inochengetera | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga kuti panguva ino, uye zvishoma mublog rakadai, hapana munhu asingazive kuti kune makambani anoremekedza zvishoma kana kusaremekedza zvakavanzika zvedu. Izvo zvakakosha ndeizvi Facebook y GoogleMakambani maviri aya ane sosi yakakosha yemari kushambadza. Kuti vakwanise kutipa zvakasarudzika ads, ivo vanoda ruzivo rwedu, uye ivo vanoziva dzinenge zvese nezvedu. Makambani akaita seFirefox kana Apple anoda kuti izvi zvichinje, asi zvirokwazvo havazi vese vanofunga zvakafanana.
Ichi chiitiko chitsva pane zvakavanzika chakatanga munaGunyana. Apple yakaburitswa iOS 14, uye chimwe chezvinhu zvaro zvitsva raive basa raizivisa vashandisi nezve data rakatorwa nechero app. Facebook yakanyunyuta nezve izvi kusati kwaburitswa yakagadzikana vhezheni yeIOS 14, ndosaka kambani yeCupertino yakanonoka kusvika kwechinhu ichi kuIOS 14.3. Mark Zuckerberg akazadzawo mapepanhau nekushambadzira achirwisa Apple achiti izvi zvingave zvakaipa kune maSME, asi Tim Cook nechikwata chake vakateedzera nehurongwa hwavo: iro rekuvanzika basa rave kuwanikwa.
Chirevo chinoita kuti tifunge kuti Google haidi kuve pachena
Iye zvino, chero mugadziri uyo anoda kuendesa app kuApple App Store anofanira kupa ruzivo rutsva, kunyanya iro data raanotora kubva kumushandisi anoisa uye anomhanya akadaro app. Kunge informa Fast Kambani (kuburikidza 9to5mac, kubva kwatakatorawo mufananidzo), Google yakagadzirisa maapp ayo muna Zvita 7, zuva pamberi peApple kumanikidza vagadziri kuwedzera ruzivo urwu kumaapps avo. Parizvino, kana tikapinda chikamu cheiyo nyowani iOS 14.3 basa, isu tinongoona meseji inoverengwa 'Hapana ruzivo rwakapihwa'.
Chero ani mushandisi anokakavara, seni, anogona kufunga kuti mwedzi hauna kupfuura kubva pakuvandudzwa kwekupedzisira uye kuti izvi zvinogona kunge zvisingareve chero chinhu, asi ndeyekuti maApplication eApple akaisa zvigadziriso, akati wandei, izvo zvinoita kuti munhu afunge kuti, zvakapusa, Google haidi kuve pachena. Zvimwe zvinogona kuitika ndezvekuti kambani iri kunyora zvekare maapps ayo kuitira kuti vasaunganidze ruzivo rwakawanda, nekuti, kana paine zvakawanda izvo "zvavanotibira" kubva kwatiri, ivo vanongowana kuzivikanwa kwakaipa.
Zvino zvinhu zviviri zvasara kuti zvionekwe: apo Google inogadziridza maapps ayo eIOS uye zvinotaurei muchikamu chekuvanzika. Ini pachangu, ndiri kutarisira iyo nguva, uye mumwe munhu angazopedzisira atsvaga dzimwe nzira kune avo maapplication uye masevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yaizove ichidzivirira kugadzirisa ayo maapplication kuti isape ruzivo nezve data yainotora
EU haidi Starlink's satellite internet uye vanosarudza kugadzira yavo